Tranomboky Kely Mahefa Be ao Grenada · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Desambra 2014 9:01 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, বাংলা, Español, Français, Italiano, Deutsch, Português, polski, Nederlands, 繁體中文, 简体中文, English
Misy tranomboky iray ao Grenada izay miala amin'ny mahazatra. Mpanoratra iray, vondrom-piangonana ary vondron'olona ifotony manao asa sosialy antsoina hoe Groundation Grenada no nanangana azy. Tranomboky kely mampiroborobo ny kolontsaim-pirotsahana an-tsehatra izay tsy mahazatra any Karaiba sy mandrisika ny tanora tsy hiditra an-tsehatra fotsiny ihany fa ny hianatra sy ny hitia ny famakiam-boky ihany koa ny Mt. Zion.
Tena mivoitra tokoa ny fifantohan'ny tetika amin'ny tanora indrindra raha jerena ny tatitry ny Fivelarana Mahaolona ao amin'ny United Nations Development Programme [fandaharan'asan'ny Firenena Mikambana momba ny Fampandrosoana] tamin'ny 2009 manondro an'i Grenada ho manana ny taham-pahantrana ambony indrindra amin'ireo Firenena ao Karaiba miteny anglisy. Ny tanora no tena iharan'izany indrindra, noho ny toe-draharaha ara-toekarena manana ny fiantraikany eo amin'ny fandehanana mankany an-tsekoly sy ny resaka mety hahazoan'izy ireo asa. Amin'izao fotoana izao dia mahatratra hatramin'ny 40 isanjato ny tahan'ny tsy fananan'asa.
Groundation Grenada mizara ny ohatra iray amin'izany: Alesia Aird, 20 taona, mpitendry mozika sy artista izay heverina ho tsy manana ifandraisana amin'ny fitazonana tranomboky manara-penitra. Mihaino ny mozikam-pitoloman'ilay Jamaikana malaza amin'ny reggae, Peter Tosh, izy ary mitovitovy kokoa amin'i Lauryn Hill noho i Nancy Pearl. Nefa mandany ny fotoanany malalaka maro amin'ny firotsahana an-tsitrapo ao Mt. Zion izy ary lasa liana amin'ny literatiora Indiana Andrefana sy ny “science fiction” [siansan'ny famoronan-tantara].
Manazava ny Groundation :
Resy lahatra i Aird fa tena miavaka manokana i Mt. Zion, tsy noho ny firehetam-pon'ireo mpirotsaka an-tsitrapo ihany, fa noho ny “toerana misy azy [ao afovoan'i St. George's] sy nipoirany izay mametraka ilay tranomboky hanana ny mampiavaka azy sy tsy dia mahazatra.”
8 ora izayBarbady